Ọchịchọ a na-atụ anya na akwụkwọ ndozi n'oge ọkọchị nke ejighị n'aka na mmachi njem
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Ọchịchọ a na-atụ anya na akwụkwọ ndozi n'oge ọkọchị nke ejighị n'aka na mmachi njem
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ọtụtụ ndị njem anọgidela na-ala azụ na ọganihu a na-atụ anya na njem nwere ike ọ gaghị eme ruo n'ókè ha chọrọ
Ihe ndi mmadu choro na mgbochi njem ka bu ihe abuo nke mbu na njem mba
Na nso nso a UK kwuputara ebumnuche ya iwebata usoro ọkụ ọkụ iji mee njem a n'oge ọkọchị
Ochicho nke ezumike ulo nwere ike idi elu
Ndị ọrụ Europe na-echekwa ego na ọkọchị 2021 na-enye ohere ịmalite ịmalite ị nweta ego dị ezigbo mkpa. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị njem nọgidere na-ala azụ na mbuli elu a na-atụ anya ya nwere ike ọ gaghị eme etu ọchọrọ. Na ejighị ihe n'aka banyere ihe mgbochi njem ga-abụ ebe, ọtụtụ ndị njem na-ala azụ ịde akwụkwọ.
Nnyocha ụlọ ọrụ na-adịbeghị anya egosiwo na ihe ndị a chọrọ na igbochi njem na-abụ isi ihe abụọ na-egbochi njem mba ụwa na 58% na 55% nke ndị zaghachirinụ na-ekwupụta na ihe ndị a ga-egbochi ha ime njem. Nke a na etinye ndebanye akwụkwọ n’oge ọkọchị n’ihe egwu ma ọ gwụla ma elebara nchegbu ndị a anya n’oge na-adịghị anya ndị na-eri ihe ga-anọgide na-eme ihere ịhapụ akwụkwọ njem mba ụwa.
The UK na nso nso a ekwuputala ebumnuche ya ịmebata usoro ọkụ ọkụ iji mee ka njem a n'oge okpomọkụ a, n'agbanyeghị na nkọwa ka dị oke. Nke a, tinyere mmachi njem na-agbanwe agbanwe na ihe ndị achọrọ kwụrụ iche, pụtara na ndị na-azụ ahịa ala azụla akwụkwọ njem maka ọdịnihu dị nso.
Ndị ahịa UK nwere ike bụrụ ndị nwere mgbagwoju anya karịa n'ihi ọkwa ọkwa usoro ọkụ ọkụ na nso nso a. Site na mgbochi dị iche iche a ga-etinye na ebe dị iche iche, ndị njem na-eche amaghị ihe ha ga-eme n'oge ọkọchị a. Ọbụna atumatu ịmegharị akwụkwọ na-agbanwe agbanwe anaghị emeju mmechuihu mgbe niile ọtụtụ ndị chere ihu na akagbu atụmatụ.
Na tụgharịa n'akụkụ, ina maka ezumike n'ụlọ nwere ike ịnọgide na elu na atụmanya nke a staycation ọganihu n'ihi na nke a n'oge okpomọkụ dị ezigbo. Site na nkwenye dị elu nke na-enye ndị na-azụ ahịa obi ike akwụkwọ na ịga nso ụlọ, nke bụ nzọ dị nchebe maka ọtụtụ, enwere ike ịtọ ndị ọrụ ụlọ maka oge okpomọkụ ọzọ nke nnukwu elele.
Onye Minista ọhụrụ ọ nwere ike ime Ecuador ike ike njem?